Ukuphupha umpheki Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Kumntu ngamnye oqeshiweyo, umphathi ubalulekile kwaye ungumntu ophakathi kubomi bemihla ngemihla. Nokuba lo mntu unendima yomzekelo wokulala okanye, ngokuchaseneyo, isiphumo sokuthintela, kuxhomekeke kwimeko nganye. Akukho mntu uthanda ukungena engxakini nomphathi. Umqeshi ngokwakhe unokuhlala kwizikhundla ezahlukeneyo kwinkampani: unokuba ngumnini wenkampani, umphathi okanye, umzekelo, intloko yesebe.
Kuba umqeshi ophakamileyo okanye umqeshi ngokusisiseko uluphawu lwamandla negunya, umbuzo uvela ngokungazi uthi: Nini ebomini bam ndithatha uxanduva kwaye ndithandabuza nini?
Ezinye zeemeko zokuphupha kunye nomphathi zenzeka rhoqo ngakumbi kunabanye. Ngoku siza kuzinikezela kula maphupha kuqala, ngaphambi kokuba sifike kutoliko lwephupha "lomphathi" ngaphezulu kweli nqaku.
1 Isimboli yephupha «Boss» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukubona umphathi, iphupha elihle okanye elibi?
1.2 Yiba ngumphathi ngokwakho ekutolikeni amaphupha.
1.3 Inkathazo yomphathi! Thixo wam liphupha lini eli?
1.4 Uthando ubudlelwane kunye nomphathi. Uhlalutyo lwamaphupha
1.4.1 Ukuwola nomphathi, kulungile ...
1.4.2 Ukwanga okushushu phakathi komphathi kunye nomphuphi
1.4.3 Ukwabelana ngesondo nomphathi. Yaphula i-taboo njengephupha
1.5 Ukudubuleka ngokweemvakalelo: kutheni umphathi ehleka okanye ekhala ephupheni
1.5.1 Ukuhleka komphathi ekutolikeni amaphupha.
1.5.2 Bhombolozani! Umphathi elila kumava ephupha.
1.6 Impilo yomphathi
1.6.1 Umntu ogulayo ophakamileyo kwihlabathi lamaphupha
1.6.2 Umphathi ufe ephupheni, kwenzeke ntoni?
1.7 Umphathi unikezela ephupheni, oko kuthetha ntoni?
1.8 Umphathi wangaphambili. Kuthekani ukuba ndiyifumana ephupheni?
2 Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «umphathi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «Boss» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukubona umphathi, iphupha elihle okanye elibi?
Ukudibana nomfazi njengomphathi ephupheni ikakhulu kubonisa ukungqubana okuzayo el mundo yomlindo. Xa umntu oleleyo ejonga umphathi wakhe kwihlabathi lamaphupha, zihlala kukho iingxabano ezithi zenzeke ngokwenyani. Ukubona umphathi ongaziwayo kwisehlo sephupha, omnye umntu ngequbuliso angathatha isikhundla sokuba ngumphathi ngokwenyani, ukuba nje umntu ophuphayo uyasebenza. Ngaphandle koko, abasemagunyeni baya kuhanjiswa kubomi babucala.
Yiba ngumphathi ngokwakho ekutolikeni amaphupha.
Ukutolikwa kwephupha kunika intsingiselo yokomfuziselo kubukho njengomphathi ephupheni. Abantu abalele bahlala belangazelela ukwamkelwa ngakumbi kunye nokuziphatha okulawulayo, ikakhulu kwindawo yokusebenza. Ngapha koko, enye imbono inokubonisa ukuba umntu ophuphayo kufuneka akhunjuzwe ukuba enze imisebenzi yakhe. Ukongeza, iphupha lokuba ngumphathi libonisa umnqweno wokuphathwa ngentlonipho.
Inkathazo yomphathi! Thixo wam liphupha lini eli?
Njengakwimeko yokuvuka ebomini, umsindo kunye nomphathi ephupheni kunokuthetha iingxaki kubomi bobuchwephesha okanye nakubomi obuphuphiweyo kunye nekhosi yonke yephupha. Kukho ukungqubana kwegunya ekusetyenzwa ngalo apha emaphupheni. Njengomthetho, ezi ngxabano zijikeleze igunya kubuntwana bephupha kunye nokuphakama kwangaphakathi kwabazali kufanelekile. Umphuphi kufuneka athathe olu phawu luphupha njengethuba lokusebenza kwindlela aziphethe ngayo ukunqanda obu bunzima kwikamva.
Uthando ubudlelwane kunye nomphathi. Uhlalutyo lwamaphupha
Ukuwola nomphathi, kulungile ...
Uphawu lwephupha lokuwola lumele ukusondela kosapho okanye umnqweno woku. Ukuba uphupha ngobuhlobo obusondeleyo nomqeshi okanye ufuna ukwamkelwa ngakumbi kubomi bobuchwephesha, ukwangana, mhlawumbi nangokunxulumana, kuyavela ephupheni. Nangona kunjalo, ukuba umntu oleleyo akayithandi intloko yesebe okanye umnini wenkampani ngokwenyani, umfanekiso ophuphayo sisilumkiso: umntu ophuphayo kufuneka alumkele ukudana nenkohliso kubomi bemihla ngemihla.
Ukwanga okushushu phakathi komphathi kunye nomphuphi
Ukwanga umele uphawu olomeleleyo lothando nothando ekuchazeni amaphupha. Ngokukodwa, amava amnandi okuphuza ephupheni amele unxibelelwano oluhle nabanye abantu. Nangona kunjalo, imeko yemeko yephupha zithatha isigqibo sokutolika:
Iphupha lokuphuza komphathi ongathandwayo, umzekelo, limele umnqweno woxolelwaniso, ngelixa ulangazelelo olufihliweyo lunokufumaneka apha. Kwangelo xesha, ukwanga kuhlala kubonisa umnqweno wokunxibelelana kunye notshintshiselwano. Ukuthandana okungasendle nomqeshi kuhlala kubonisa umntu ophuphayo isidingo samandla njengomfanekiso wephupha.
Ukwabelana ngesondo nomphathi. Yaphula i-taboo njengephupha
Njengophawu lwephupha, isini kunye nomphathi sinokumema isimemo sokuthintelwa kancinci kwaye, endaweni yoko, ukuzithemba ngakumbi. Mhlawumbi umntu ophuphayo akazithembanga kwaphela xa kufikwa ekwenzeni izigqibo.
Ukuba owongamileyo uqalile ephupheni kwaye sele esondele ngokwesondo kumntu ophuphayo, umphathi usenokwazi ebomini bokwenyani ukuba angafumana njani umsebenzi emsebenzini. Ngokuchasene noko, ukuba ibingulo mntu kuthethwa ngaye owakhohlise umphathi ephupheni, unokufuna ukwenza ngokubonakalayo ekuvuseni ubomi. Kwangelo xesha, iphupha linqwenela ukwenza into engavumelekanga.
Ukudubuleka ngokweemvakalelo: kutheni umphathi ehleka okanye ekhala ephupheni
Ukuhleka komphathi ekutolikeni amaphupha.
Uncumo lomphathi owonwabileyo lineentsingiselo ezahlukeneyo ekutolikeni amaphupha, kuba ngapha koko, intsingiselo yolonwabo yahlukile kubantu abaninzi. Uncumo lomnye umntu lunokuthi, nangona kunjalo, lubonise ukuba umntu oleleyo uza kufumana ukuqatshelwa kungekudala. Nangona kunjalo, iimvakalelo ezinjalo zolonwabo ephupheni nazo zingabonisa ukuba ubudlelwane busebonakala ngengxabano.
Bhombolozani! Umphathi elila kumava ephupha.
Kwelinye icala, iindaba ezoyikisayo zokwenyani okanye inkxalabo enkulu inokuba ngunobangela wesimboli yephupha lomntu ophakamileyo. Isikhalazo esiqhelekileyo salowo uleleyo kunye nomphathi okanye intloko yesebe nayo inokubonisa imvakalelo eyomeleleyo yokuhlangana. Ukuxhasana okwenyani kukhokelela kwintlungu eqhelekileyo ephupheni.
Kwelinye icala, umphathi olilayo ngumqondiso wokuba umntu oleleyo uyafuna kwaye angazikhulula kubudlelwane bokuxhomekeka ebomini bakhe.
Umntu ogulayo ophakamileyo kwihlabathi lamaphupha
Ukugula komnini-shishini okanye ulawulo kungachazwa lixesha lokukhathazeka. Ngokwesiqhelo kubakho ithuba lamaphupha anjalo kwihlabathi lokwenyani lomntu uleleyo. Ubunzima bemihla ngemihla kunye neengxaki zobomi zikuthatha ukuba ulale: endaweni yokuphumla kunye nokuphumla, amaphupha amabi axhaphakileyo apho umphathi egula ngokufuziselayo. Okubi kakhulu xa siphupha isifo, kokukhona kusiba nzima ngakumbi yimithwalo ethwalwa ngumntu oleleyo ebomini bokuvuka.
Umphathi ufe ephupheni, kwenzeke ntoni?
Ukufa Yomphathi kwiimeko ezininzi liphupha elibi. Amaphupha anjalo sisimemo ekuphupheni sokujonga kwakhona ubudlelwane nomqeshwa ophakamileyo kwisikhundla. Iphupha lomphathi oswelekileyo ngokuqinisekileyo linokuba sisimbonono sokuhlengahlengiswa kobudlelwane phakathi komntu omkhulu nomphuphi. Rhoqo ziimvakalelo ezingalunganga ezivakaliswa ngommeli wokufa ephupheni.
Umphathi unikezela ephupheni, oko kuthetha ntoni?
Ukuyekiswa ephupheni kuhlala kubonisa utshintsho olukhulu kwikamva. Mhlawumbi ukugxothwa komphathi onamava ephupheni kubhekisa kutshintsho kwindawo yokwenyani yomsebenzi, nangona kunjalo utshintsho lwangasese kunye nolwakho siqu lunokucingelwa. Ukuba umqeshi uyarhoxa emsebenzini wamaphupha, umfanekiso wephupha unokuchazwa njengophawu lokungabi nathemba kukabani; Umphuphi akasakholelwa kwimpumelelo yakhe (yobungcali).
Umphathi wangaphambili. Kuthekani ukuba ndiyifumana ephupheni?
Umphathi wangaphambili kufuneka atolikwe ikakhulu njengophawu lwephupha lamandla nolawulo, ukusuka apho, nangona kunjalo, iphupha liyekile ngeli xesha. Ke ngoko, iphupha limele isilumkiso, nangona kunjalo, ukubeka ubungqongqo obuthile ngemini ukuze ufeze ngokufanelekileyo imisebenzi kunye nemisebenzi yakho.
Rhoqo ephupheni malunga nomqeshi wangaphambili, amava adlulileyo obuchwephesha adityaniswa neengxaki ezikhoyo emsebenzini. Apha kukho umahluko kwaye ke kukho into ephazamisa umphuphi. Nabani na oqala impikiswano eshushu kunye nomqeshi wangaphambili kwishishini lamaphupha akaqinisekanga ngenkangeleko yobungcali.
Umfanekiso wephupha apho umphathi avela khona unokuhambelana nobomi bemihla ngemihla kwaye ujongane nomsebenzi wokwenyani, ke ukutolikwa kwento eyenzekayo kuxhomekeke ngaphezulu kwako konke ukubaluleka kwendima yomphathi kubomi bokwenyani bomntu obuzwayo. Umbuzo.
Abaphathi bahlala benika imiyalelo ekufuneka yenziwe. Oku kuvumela Ukuxhomekeka Zivela ngenxa yokuba ufuna ukuqhubela phambili ukuya kwinqanaba eliphezulu kakhulu.
Isuphavayiza inokuxhasa ekucwangciseni iiprojekthi zomsebenzi ngendlela elungileyo, okanye inokwenza ubomi bemihla ngemihla bube nzima ngakumbi ngokuzabalazela amandla, amandla, kunye nobutyebi ngokuzama ukulawula imeko iyonke ngesikhundla sayo.
Ngamanye amaxesha isimboli yomqeshi ephupheni inokusetyenziswa njengesilumkiso ngokuchasene nobukho kunye nobungcali. ingxaki baqonde ukuba bakufuphi kungekudala. Kubudlelwane obuninzi bezengqesho kuyavakala ukuba ubuncinci ulwazi olusisiseko ngomthetho wengqesho. Njengomntu oqeqeshwayo okanye ofundayo, awunazibophelelo kuphela, kodwa namalungelo ekufuneka uwanyanzelisile ngokuchasene nomphathi wakho.
Ezi ntshukumo zilandelayo phakathi komntu ophakamileyo kunye nomphuphi ngaphakathi kwenkqubo yesakhelo sephupha zinempawu ezibonakalayo zekhonkrithi:
Bona umphathi ongaziwayo: kuyakubakho umphathi omtsha
Ukubalekela umphathi omtsha: umonde uyimfuneko kwimpumelelo
umphathi wangaphambili: ukulala akusalawulwa
bona umphathi wakho-kuya kubakho ingxoxo
Thetha kumphathi: ibonisa indawo engcono
Yilwa nomphathi: ukungaqiniseki okukhoyo ngoku
yithiye umphathi-ulumke ungonzakalisi abanye abantu ngengozi
Ukuxhawulana, ukubambana izandla okanye ukuxhawula: utshintsho lomsebenzi olunokwenzeka
Ndifumene isipho esivela kumphathi - Ilahleko okanye utshintsho lusahleli
Ukunyuselwa ngumphathi: kukho amathuba aphezulu okuba kuya kwenzeka kwinyani
Wanga umphathi: unxibelelwano luyimfuneko
Ukuzonwabisa kunye nomphathi: umnqweno wokwamkelwa kwezakhono zobungcali kunye nempumelelo
Ukwabelana ngesondo nomphathi: umphuphi uthanda umceli mngeni, ukudlala ngengozi
Unobhala kunye neNtloko: Ukuxhomekeka kwimicimbi yobungcali.
Abo bakufumanisa kunzima ukunqamla kwaye baphumle ixesha elide emva kokushiya inkampani bahlala bejongana neziganeko ezinxulumene nomsebenzi besebuthongweni. Umphathi ephupheni unokuba ngumfuziselo wesidingo sokungazi kakuhle kubaba, umntu onegunya okanye umntu wentlonipho. Isithixobona i-ankile, umntu wokuxhomekeka.
Nangona kunjalo, kunokuba yinyani ngqu zulwano Yiya. Mhlawumbi ulindelo lomvuzo aluzange lufezekiswe okanye, ngokuchaseneyo, nemisebenzi yomsebenzi. Kubalulekile ukuthathela ingqalelo indlela umphathi aziphethe ngayo ephupheni, kuba uhlobo lokulandelelana sele luqulathe ukutolikwa okuninzi okunokwenzeka.
Umphathi ongathandekiyo okanye ongqwabalala, kwelinye icala, osebenzisa amandla ngendlela egwenxa, inokuba ngumqondiso wokuba umntu ophuphayo anganqwenela ukuba ngumphathi ngokwakhe okanye kufuneka amkhumbuze ngaye. Umsebenzi wasekhaya Thobela kuba uqhuba imisebenzi yakho ngokungakhathali okanye uphumeza ezakho izimvo. Ukuba uziva ungonwabanga phambi kongaphezulu kwakho, uziva uthintelwe kwinkululeko yakho.
Nangona kunjalo, ukusebenzisana okuhle kakhulu phakathi kwabo kubonisa ukuba iphupha lidibana neempawu zabo zobunkokeli. Nangona kunjalo, lo mntu kuthethwa ngaye unezimo zengqondo ezahlukileyo malunga nomxholo lowo. igunyaefuna ukuqwalaselwa ngokutsha kwaye kusetyenzwe ngayo.
Umphathi weSuphavayiza yokuXhatshazwa ngokwesondo ibonisa imvakalelo yokwenyani iindleko ezingaphantsi ngaphezu kwabanye abantu kwaye uthumele ngokuzenzekelayo. Nokuba isigaba soxinzelelo sobomi sinokuzithanda iimeko ezinjalo zokuphupha.
Ukuba umphathi ubonakala ephupheni, siya kudibana nenye. Inxalenye yethuOko kubonakala kwindlela aziphethe ngayo umphathi. Singafunda koku kwaye siqhubeke ngakumbi.